छि ! भुपु नेपाली, वाह् ! गौरिका – prabhab.com छि ! भुपु नेपाली, वाह् ! गौरिका – prabhab.com
Posted on December 13, 2019 April 11, 2020 /2बर्ष अगाडी / 13462 Viewed
केही समय पहिले नेपाल सरकारका पूर्व सामान्य प्रशासन मन्त्री लालबाबु पण्डितले विदेशमा भएका नेपालीलाई भूपू नेपाली भन्दै सार्वजनिक रुपमा गाली गरे । त्यति मात्र होइन भूपू नेपालीलाई त्रिशुलीमा बगाउने समेत भन्न भ्याए ।
विदेशिएका नेपालीले नेपालमा भएको जग्गा, सम्पत्ति उपभोग गर्न नपाउने , नागरिकतासँग जोडिएका कुनै पनि सहायता लिन नपाउने उनका भनाइहरू नेपाली मिडियामा छ्यापछ्याप्ती आए । विदेशमा बस्ने नेपाली माथिको पूर्वाग्रह होस वा सस्तो लोकप्रियताका लागि गरिने राजनीतिक स्टन्ट मात्र । जे भए पनि देशको भूगोल भन्दा पर बसेर देश र आफन्तलाई माया गर्ने, श्रम र पसिनाले सिञ्चित गर्नेहरू माथि देशको जिम्मेवार मन्त्रीले गरेको विष बमनले प्रवासी नेपालीलाई आहत गर्यो ।
लाखौँ नेपाली छन्, जसले विदेशमा आफ्नो छाक कटाएर, थोरै खाएर, कम सुतेर सुका सुका जम्मा गरेको पैसा नेपाल पठाउँछन् । नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । नेपालमै भविष्य देख्छन् । परिवारको खुशी देख्छन् । घर घडेरी किन्छन् । परिवार र आफन्तलाई व्यापार व्यवसाय गर्न सघाउँछन् । केही वर्ष विदेश बसेर नेपाल फर्कौला र नेपालमै केही गरौँला भन्ने मीठा सपना बुन्छन् ।
पण्डितले विदेशिएका नेपाली तिर फर्केर थुकेको थुक सुक्न नपाउँदै विदेशमै बस्ने नेपाली चेली गौरिका सिंहले सागको एउटै संस्करणमा चार स्वर्ण दिइन् । उनले देशको शिर उँचो बनाइन् । उनी नेपाल बस्दिनन् । उनी नेपाली पनि अंग्रेजी टोनमा बोल्छिन् । उनलाई नेपाली बोल्न भन्दा देशको शिर उँचो बनाउन आउँछ । देशको सफलताको लागी उनलाई पूर्व मन्त्री पण्डितले लगाएको धारे हातले खासै फरक पारेन ।
गौरिका उदाहरण मात्र हुन् । उनीजस्ता लाखौँ नेपाली छन्, जसले विदेशमा आफ्नो छाक कटाएर, थोरै खाएर, कम सुतेर सुका सुका जम्मा गरेको पैसा नेपाल पठाउँछन् । नेपालमा लगानी गर्न चाहन्छन् । नेपालमै भविष्य देख्छन् । परिवारको खुशी देख्छन् । घर घडेरी किन्छन् । परिवार र आफन्तलाई व्यापार व्यवसाय गर्न सघाउँछन् । केही वर्ष विदेश बसेर नेपाल फर्कौला र नेपालमै केही गरौँला भन्ने मीठा सपना बुन्छन् ।
त्यति मात्र होइन, नेपालमा कोही बिरामी भयो, कोही भोको भयो, बाढी पहिरो गयो, आगलागी भयो सहयोगमा जुटी हाल्छन् । मातृभूमि थोरै दुख्दा पनि विदेशमा बस्ने नेपालीहरू जुट्छन् । हातेमालो गर्छन् । आफ्नो छाक कटाएर पनि मातृभूमिलाई सघाउँछन् ।
छिमेकी भारतको बोर्डरबाट ल्याइएका ११ लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिइन्छ । राज्य सञ्चालनका हकदार बनाउदै सांसद, मन्त्री बनाइन्छ । तर पुस्तौँ पुस्ता देशको भूगोलमा बसेका तर परिस्थिति र परिवन्धले विदेशमा कर्म गरिरहेका गौरिका जस्ता हजारौं नेपालीलाई नेपालको नागरिकता त्याग भनेर दवाव दिइन्छ ।
तर तिनै सुन्दर नेपाली मनहरू राजनीतिका शिकार बन्छन् । तिनै नेपालीहरू भूपू नेपाली बन्छन् । तिनै नेपाली हेपिन्छन् । तिरस्कृत हुन्छन् । नेपाल र नेपालीसँग जन्मजात जोडिएको मायालाई थप प्रगाढ बनाउन खोज्दा लखेटिन्छन् । अनि छिमेकी भारतको बोर्डरबाट ल्याइएका ११ लाख भारतीयलाई नेपाली नागरिकता दिइन्छ । राज्य सञ्चालनका हकदार बनाउदै सांसद, मन्त्री बनाइन्छ । तर पुस्तौँ पुस्ता देशको भूगोलमा बसेका तर परिस्थिति र परिवन्धले विदेशमा कर्म गरिरहेका गौरिका जस्ता हजारौं नेपालीलाई नेपालको नागरिकता त्याग भनेर दवाव दिइन्छ । नेपालसँग जोडिन चाहेमा अधिकार बिहिन दोस्रो दर्जाको नागरिकताको भिख माग्न भनिन्छ ।
सामाजिक संजालमा केही दिन पहिले विदेशमा बस्ने एकजना नेपालीले “राष्ट्रबादी सरकार विस्तारबादको अगाडी लम्पसार” भनेर स्टाटस लेखे । उनको स्टाटसको तल बिग्रेल्ती प्रतिक्रियाहरु आए । विदेशमा बसेर सरकारलाइ गाली गरेको भन्दै कतिपय राष्ट्रबादीहरुले प्रतिक्रिया दिए ।
प्रतिक्रिया दिने मध्येका एकजनाले लेखे, देशको मायाँ लाग्छ भने नेपाल आएर लेख । विदेशमा भाँडा माझेर ठूलो कुरा नगर भन्दै चुनौति दिए ।
प्रतिक्रिया दिने मध्येका एकजनाले लेखे, देशको मायाँ लाग्छ भने नेपाल आएर लेख । विदेशमा भाँडा माझेर ठूलो कुरा नगर भन्दै चुनौति दिए । ति प्रतिक्रिया दिने चाहीँ चिनेजाने कै युवा थिए । उनले केही समय पहिले अमेरिकाको भिजाको लागी आवेदन दिए, अन्तरवार्ता पनि दिए तर भिसा पाएनन् । उनले युरोप र अष्ट्रेलिया जान पनि प्रयास गरे तर सकेनन् । कतैको भिजा नलागेपछी अहिले उनी राष्ट्रबादी भएका छन् । नेताको अघिपछी हिड्ने, ठेक्का पट्टा समाल्ने र विदेशिएका नेपालीलाइ खिसिटिउरी र गाली गलौज गर्ने उनको दैनिकी बनेको छ ।
अर्का एकजना युवा छन् । पेशाले उनी निजामति कर्मचारी हुन् । उनले सामाजिक संजालमा राजनीति भन्दा बढी खेलकुद शेयर गर्छन् । अर्जेन्टिनाको खेलाडिले एक गोल हान्दा उनले संसार जिते जस्तै गर्छन । ब्राजिल, इटाली, जर्मनी भन्ने शब्दहरु उनको सामाजिक संजालमा धेरै अट्ने शब्द हुन् । उनले देशको लागी एउटा शब्द पनि खर्च गरेको देखिँदैन । तर विदेश बस्ने नेपालीले नेपालको बारेमा स्टाटस राख्यो भने उनले नराम्रो सँग गाली गलौजमा उत्रिन्छन् । उनी नेपाल बसेर नेपालका बारेमा एक शब्द खर्चिन्नन्, नेपाल बसेर विदेशको समाचार प्यारो लाग्छ, तर विदेश बस्ने नेपाली आफ्नो मातृभूमीको बारेमा केही लेख्दा विरोध गर्छन ।
विदेशिएका नेपालीको विरोध गर्नु, होच्याउनु आफुलाई राष्ट्रबादी देखाउने एउटा हतियार बनेको छ अचेल । पुर्व मन्त्री पण्डितले पनि त्यही गरे । उनलाई पनि विदेश बस्ने नेपालीलाई गाली गर्दै राष्ट्रबादी भएको ढ्वाङ पिट्नु थियो । यही राष्ट्रबादको हतियार लिएर चुनाब जित्नु थियो । अल्छि हरुको केही झुन्डलाई अमेरिका युरोपको भिजा नपाएको झोकमा विदेश बस्ने नेपालीलाइ कमजोर बनाउनु थियो । यही अबसरको उपयोग गर्दै आफुलाइ राष्ट्रबादी कार्यकर्ता घोषणा गर्दै कुनै राष्ट्रवादी पार्टीमा गएर काम नगरी लुटेर पैसा कमाउने चोर बाटो फेला पार्नु थियो । बिरोध गरे । गाली गरे । सरापे । थुके । हिजो सयौं राष्ट्रबादीले भूपू नेपाली भनेर थुकेके थुक सुक्न नपाउँदै गोरिकाले पौडीमा चार स्वर्ण दिइन र राष्ट्रबादी सरकारलाइ खेलमा प्रगति गरेर अझै राष्ट्रवादी कहलाइदिइन । उनी पौंडिदै गर्दा पुर्वमन्त्री पण्डितको बचन सम्झेको भए मात्रै पनि यो उपाधी आउने थिएन। उनी देश सम्झेर खेलिन ।
विदेशमा बस्ने नेपालीलाई थुक्नु भन्दा उनीहरुले आर्जन गरेको दक्षता, शिप, क्षमता र बटुलेको अनुभवलाई देशसँग जोड्नसके खेलमा जस्तै अरु क्षेत्रमा पनि नेपालले स्वर्ण हासिल गर्न सक्छ भन्ने यो मननयोग्य उदारण हो ।
गौरिकाले नेपाललाइ खेलकुदमा दिएको सफलताबाट नेपाल सरकारले घमन्ड गर्नु भन्दा पनि केही सिक्नुपर्ने देखिन्छ । उनी नेपालमै बसेर पौडि सिक्थिन भने एउटै संस्करणमा चार स्वर्ण ल्याउन असम्भव थियो । यो सफताको पछाडी उनको परिवार, संस्कार, सिप, सिकाइको निरन्तरता, खेलमैदान, लगानी, शिक्षा र प्रशिक्षक छन्, जुन नेपालमा सम्भब छैन् । यि कुरा सम्भव हुनको लागी सरकार चलाउनेहरुले सिक्नुपर्छ । खेल जित्दा राष्ट्रबादी अरु बेला भूपू नेपाली भनेर लगाइने विल्लाले सायदै कसैलाइ फाइदा पुर्याउला ।
नेपालले सागमा राम्रो नतिजा ल्यायो । देशले ५१ वटा स्वर्ण पदक ल्याउनु नेपालको लागी सानो कुरा होइन । तर यो सफलतामा सरकारको भुमिका के थियो भन्ने प्रश्न आउँछ । राम्रो खेल मैदान छैन । खेलकुद सामग्री छैनन्, चाहिने साइकल छैन, लुगा छैनन् । बन्दुक मागेर खेल खेल्नु परेको छ । प्रशिक्षक छैनन् ।
खेल जितेपछी जित्नेलाइ सम्मान गर्नु भन्दा खेल पहिलै बन्दुक, साइकल र अन्य आवश्यक सामग्री किन्ने पैसा दिन सकेको भए खेलाडिको आत्मबल कति बढ्थ्यो होला? विदेशमा बस्ने नेपालीलाई थुक्नु भन्दा उनीहरुले आर्जन गरेको दक्षता, शिप, क्षमता र बटुलेको अनुभवलाई देशसँग जोड्नसके खेलमा जस्तै अरु क्षेत्रमा पनि नेपालले स्वर्ण हासिल गर्न सक्छ भन्ने यो मननयोग्य उदारण हो । साग खेलमा जस्तै नेपालीलाई देशको बृहत्तर हितका खातिर सवै क्षेत्रमा सहभागी गराएर अगाडि बढाउदा देशको इज्जत पक्कै बढ्छ ।
भौगोलिक रुपमा जहाँ बसेपछि नेपालीको मन नेपालबाट टाढा छैन । नेपालको करिब २५ प्रतिशत जनसंख्या देश बाहिर छ । यहि २५ प्रतिशतले पसिना बगाएर नेपाल पठाएको रेमिटेन्सले देश चलेको छ । देशको शिक्षा, स्वास्थ्य, खेलकुद र विकास सम्म सबै कुरामा विदेशिएका नेपाली र विदेशी दाताको योगदान छ । तर रगत-पसिना बगेको मातृभुमी प्रतिको अटुट स्नेह भएका प्रवासी नेपालीलाई दोहोरो नागरिकता दिने कुरामा अड्चन सिर्जना गरेर छिमेकी देशका नागरिकलाई दोहोरो नागरिकता र राष्ट्रियता बेच्दा पनि सवै मौन देखिनु बिडम्वना हो । राजनीतिक भबिष्य अन्धकारमा पर्लाकी भनेर छिमेकीको भय र त्रासमा बाचेका नेपालका राजनीतिक दल र नेताहरुबाट प्रवासी नेपालीले अरु के अपेक्षा गर्ने ?